Wzọ 3 Ahịa azụmaahịa na Mobile | Martech Zone
Wzọ 3 Businesszọ azụmahịa na Mobile
Thursday, May 31, 2012 Sunday, October 4, 2015 Adam Obere
Nkuchi ekwentị na-arị elu mana mana azụmaahịa ole na ole na-aza. Ndị na-ahụ ịrịba pụta na ha ego on ndị na-adịghị na-hapụrụ. Ozi dị na infographic a enweghị ike ịkọwa karịa.
Ọ bụ azum, nzuzu. Ọbụna smart CIOs na ụlọ ọrụ ndị a na-achịkwa nke ọma na-enwe nsogbu ka ha nabatara agagharị. Ọ bụ ezie na ngwaọrụ mkpanaka na ngwa ọdịnala dị ọhụụ ma gbagwojuru anya n'ụzọ dị iche na PC na ngwa sava, ihe ịma aka ndị na-agbagha ndị isi IT na-abụkarị ndị ọrụ aka na azụmahịa na atụmatụ. Nke ahụ dị ka nchọpụta IDG
Budata Whitepaper miri emi na SAP.
Mgbasa ozi na Egwuregwu Egwuregwu Na-arụ Ọrụ?
Mee 31, 2012 na 1: 34 PM
Dika teknụzụ ekwentị na-aga n'ihu na-emeziwanye nke a nwere ike bụrụ nnukwu nsogbu maka ụdị azụmaahịa niile. Ndị ọkachamara na mpaghara a ga-eme nke ọma na ego n'ime afọ ole na ole sochirinụ. Daalụ maka ozi bara uru.